Dark Lisk စျေး - အွန်လိုင်း DISK ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို Dark Lisk (DISK)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ Dark Lisk (DISK) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ Dark Lisk ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
DISK – Dark Lisk
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ Dark Lisk တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
Dark Lisk များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
Dark LiskDISK သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.000404Dark LiskDISK သို့ ယူရိုEUR€0.000342Dark LiskDISK သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000309Dark LiskDISK သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000367Dark LiskDISK သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00359Dark LiskDISK သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00255Dark LiskDISK သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.00893Dark LiskDISK သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.0015Dark LiskDISK သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.000534Dark LiskDISK သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.000565Dark LiskDISK သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.00896Dark LiskDISK သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00313Dark LiskDISK သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00217Dark LiskDISK သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.0302Dark LiskDISK သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.0682Dark LiskDISK သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.000554Dark LiskDISK သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.000618Dark LiskDISK သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0125Dark LiskDISK သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.0028Dark LiskDISK သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.0431Dark LiskDISK သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.479Dark LiskDISK သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.156Dark LiskDISK သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0295Dark LiskDISK သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0111
Dark LiskDISK သို့ BitcoinBTC0.00000003 Dark LiskDISK သို့ EthereumETH0.000001 Dark LiskDISK သို့ LitecoinLTC0.000007 Dark LiskDISK သို့ DigitalCashDASH0.000004 Dark LiskDISK သို့ MoneroXMR0.000005 Dark LiskDISK သို့ NxtNXT0.0315 Dark LiskDISK သို့ Ethereum ClassicETC0.00006 Dark LiskDISK သို့ DogecoinDOGE0.117 Dark LiskDISK သို့ ZCashZEC0.000005 Dark LiskDISK သို့ BitsharesBTS0.0124 Dark LiskDISK သို့ DigiByteDGB0.0129 Dark LiskDISK သို့ RippleXRP0.00143 Dark LiskDISK သို့ BitcoinDarkBTCD0.00001 Dark LiskDISK သို့ PeerCoinPPC0.00134 Dark LiskDISK သို့ CraigsCoinCRAIG0.184 Dark LiskDISK သို့ BitstakeXBS0.0172 Dark LiskDISK သို့ PayCoinXPY0.00705 Dark LiskDISK သို့ ProsperCoinPRC0.0507 Dark LiskDISK သို့ YbCoinYBC0.0000002 Dark LiskDISK သို့ DarkKushDANK0.13 Dark LiskDISK သို့ GiveCoinGIVE0.875 Dark LiskDISK သို့ KoboCoinKOBO0.092 Dark LiskDISK သို့ DarkTokenDT0.000372 Dark LiskDISK သို့ CETUS CoinCETI1.17